Gbasara anyị - Toptag Technology Co., Ltd.
Shenzhen TopTag Technology Co., Ltd guzobere na 2008 ya na ụlọ ọrụ abụọ dị na Hong Kong na Shenzhen, China. TopTag guzobere site na otu ndị nwere mmụọ na ndị okike nwere ọgaranya RFID trading na rụpụta ahụmịhe.
TopTag dị iche iche na aha RFID dị iche iche na aha dị iche iche na ihe dị iche iche. Mkpado anyị sitere na obere oge na Ultra-high frequency, nke a na-ejikarị na NFC Field, Mobile Payment, Access Control, ọkọnọ nchịkwa njikwa, njikwa ngwakọ, nchekwa & njikwa, njikwa anụ ụlọ na ihe ndị ọzọ. Anyị na-nwere pụrụ iche edoghi nke RFID igbochi ngwaahịa tinyere RFID igbochi kaadị njide, RFID igbochi kaadị, mgbaàmà igbochi pouches wdg
TopTag abụghị naanị metụtara R&D, n'ichepụta, ire ahịa kamakwa ọ na-enye ọrụ nyocha ọrụ aka na nkwado. Ahaziri ọrụ dị maka ndị ahịa anyị iji hazie ha na mkpado na aha na usoro nke ọrụ, udi na ihe onwunwe.
Ike anyị bụ
Anyị nwere ike ime omenala na mkpado ndị kasị flexibly, na imewe, ọ bụla buru ibu ma ọ bụ ọ bụla size.
Usoro ọkachamara 5 iji hụ ịdị mma dị elu, ikike buru ibu na oge kachasị dị mkpirikpi.
Jiri uru dị iche iche nke ụlọ ọrụ dị iche iche wee nye ngwaahịa kachasị mma na ọnụahịa kachasị mma.
Nkwado ndị ọkachamara ọkachamara na ndị ahịa ahịa kachasị arụ ọrụ.
Ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa bụ ihe ịga nke ọma anyị, yabụ ndị ahịa kacha mma.